2.4 Ny evanjelisma sy ny karismatika
Ny evanjelisma sy ny karismatika[hanova | hanova ny fango]
Betsaka ny fiangonana niorina taorian'ireo fiangonana voalaza anarana etsy ambony, izay samy mikarakara ny ara-panahin' ny Malagasy sy ny mponina eto Madagasikara, ka ny ankamaroany dia ao amin' ny atao hoe evanjelisma sy ny karismatika. Tsy mitsaha-mitombo isa ireo fiangonana ireo. Maro amin' izy ireo no matetika lazaina amin' ny anarana hoe "fiangonana zandriny".
Hatramin' ny fiandohan' ny fivavahana kristiana teto Madagasikara no nisian' ny fifanandrenana teo aminy sy ny fivavahan-drazana malagasy. Ny Kristiana milaza fa asan' ny devoly na asan' ny maizina ny fivavahan-drazana malagasy fa ny mpandala ny fivavahan-drazana kosa miampanga ny Kristiana ho mpanimbazimba ny zavatra navelan' ireo nahitany masoandro. Teo amin' ny tantara dia i Ranavalona I no nalaza tamin' ny fiarovana ny fivavahan-drazana manoloana ny kristianisma izay niteraka ny fanenjehana mamaivay ny mpanaraka ity farany. Rehefa maty Ranavalona I dia nahazo laka amin' izay ny fivavahana kristiana. Miseho ny fanoheran' ny Kristiana ny fivavahana amin' ny sampy, ny fivavahana amin' ny razana, ny finoana ny tromba sns, indrindra eo amin' ireo fiangonana prôtestanta (ao amin' ny sehatry ny fifohazana) sy evanjelika. Mandraka ankehitriny dia mahazo laka ny kristianisma ka na amin' ny sehatra ara-pôlitika sy ao amin' ny fitondram-panjakana aza dia tsy mipetraka mazava ny maha fanjakana laîka an' i Madagasikara.
Fampifangaroana[hanova | hanova ny fango]
Matetika koa anefa ny fivavahana kristiana dia tanterahin' ny mpino kristiana sasany amin' ny fampifangaroharoana azy amin' ny fivavahan-drazana (sinkretisma).
Firaisan' ny Skotisma eto Madagasikara
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristianisma_eto_Madagasikara&oldid=1041467"
Voaova farany tamin'ny 12 Desambra 2021 amin'ny 15:41 ity pejy ity.